Kaominina Soavina : mitohy ny fanampiana ireo traboina | NewsMada
Kaominina Soavina : mitohy ny fanampiana ireo traboina
Herintaona, ny asabotsy lasa teo ny nitrangan’ilay loza voajanahary izay namela takaitra goavana tamin’ireo mponina eny Soavina. Olona miisa 2 500 traboina, miisa 76 kosa ireo trano rava taorian’ny fahavakisan’ny fefiloha. Maro amin’ireo mponina no mbola tsy tafarina amin’ny fiainana noho ny fahapotehan’ireo tanimbary mirefy 472 ha. Manoloana izany indrindra nahatsiaro ireo mponina tratran’ny fahasahiranana ny ben’ny Tanànan’i Soavina ka nanolotra fanampiana ireo zanaky ny traboina. « Tsy mbola tafarina mihitsy ny fiainan’ireo mponina taorian’iny loza voajanahary iny. Niresaka tamin’ireo malala-tanana ny kaominina ka tapaka taorian’izay fa homena sakafo isaky ny asabotsy ireo ankizikely latsaky ny 10 taona », hoy ny fanazavan’ny ben’ny Tanànan’i Soavina, Rakotoarisoa Rigobert.
Nanomboka ny asabotsy teo, araka izany, ny fanomezaka sakafo ireo ankizikely latsaky ny 10 taona ary hitohy isaky ny asabotsy hatrany izany mandritra ny fotoana tsy voafetra. Miisa 800 ireo ankizikely nomen’ny kaominina sakafo ireto izay ao anatin’ny fokontany miisa dimy ao amin’ny kaominin’i Soavina.
Mponina ao amin’ny kaominina ihany ireto nifanome tanana amin’ny famahanana ireto ankizy sahirana ireto.
Fa ankoatra izany, natolotry ny kaominina tamin’ny alalan’ny ben’ny Tanàna koa ny kidoro sy ondana vaovao ho an’ny CSB II. Fiaraha-miasa tamin’ireo malala-tanana ao amin’ny kaominina hatrany no nahatontosana izany, raha ny fanazavan’ny ben’ny Tanàna.
Nohamafisin’ny ben’ny Tanàna fa hisy ny fanatsarana ity CSB II ity. Nilaza kosa izy fa vonona hatrany ny kaominina amin’ny fiahiana ny fiainan’ireo mponina ao amin’ny kaominina Soavina amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary.